पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनको दुई वर्ष पूरा, यस्ता छन् दुई वर्षमा प्राधिकरणले हात पारेको सफलता ! - Arthakoartha.com
पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनको दुई वर्ष पूरा, यस्ता छन् दुई वर्षमा प्राधिकरणले हात पारेको सफलता !
काठमाडौं, १२ पुस । विसं २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिको परकम्पले भत्किएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि स्थापना गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । पुनर्निर्माणको कामलाई तीब्रता दिन भन्दै प्राधिकरण गठन गरे पनि त्यसले अझै प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।
राजनीतिक खिचातानीका कारण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत पटक पटक फेरिँदा पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको हो । स्थापनाको दुई वर्षमा प्राधिकरणले पुरातत्व विभागको अगुवाईमा ७९ वटा सम्पदाको मात्र पुनर्निर्माण सकाएको छ । अझै ३ सय १४ सांस्कृतिक सम्पदा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
भूकम्पले क्षतिग्रस्त शैक्षिक संस्थामध्ये ५० प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणको दाबी छ । तर ७ हजार ५ सय ५३ शैक्षिक संस्था पुनर्निर्माण हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म २ हजार ७ सय ७१ वटा मात्र निर्माण भइसकेका छन् ।
निजी आवास पुनर्निर्माणले भने गति लिन सकेको छैन । अहिलेसम्म ४० प्रतिशत मात्रै निजी आवास निर्माण सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अहिलेसम्म ७९ हजार ५ सय १४ वटा घर निर्माण भए पनि अझै १ लाख ९४ हजार १ हजार ९६ घर निर्माण बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
जीवन विकास लघुवित्तको आइपीओ बिक्री खुला